ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၆) – Maung Paris | MoeMaKa Burmese News & Media
ပြင်သစ် ဘာသာ လေ့လာစရာ (အပိုင်း ၆)
Lesson6( Leçon6)
ပါရီမောင်၊ မတ် ၁၅၊ ၂၀၁၃
Les salutations နှုတ်ဆက် ပြောဆိုခြင်းများ
Conjugaison Verbe Groupe (1) ကြိယာအုပ်စု (၁) ချိန်ညှိခြင်း
ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာမှာ ကြိယာအုပ်စု (၁) မှာပါဝင်တဲ့ အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ ကြိယာ တွေကို ကတ္တားပုဒ်နဲ့ ချိန်ညှိပုံ Conjugaison လုပ်နည်း ဖေါ်မြူလာ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေဖြစ်တဲ့ Adjectif , Préposition , Adverbe တွေနဲ့ ကြိယာအုပ်စု (၂) နဲ့ (၃) တွေ ကို မဆက်ခင်မှာ အခြေခံ စကားပြောဖြစ်တဲ့ နှုတ်ဆက် ပုံလေးတွေ ကို ဒီတပါတ်မှာ ပေးချင်ပါတယ်။
ကြိယာအုပ်စု (၁)ဟာ Conjugaison လုပ်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဆိုပေမဲ့လည်းချွင်းချက်လေးတွေတချို့ရှိနေပါသေးတယ်။
Syllabe ဆီလားဗ်လ် ဆိုတာဟာ စာလုံးတခုရဲ့ အသံထွက်တဲ့ အကြိမ် အရေအတွက်ကို ပြောတာပါ။
ဥပမာ — Conjugaison ဆိုတဲ့ စာလုံး ကိုကြည့်ရင် ကွန် – ဂျူ – ဂေး – ဇွန်း ဆိုပြီး အသံ ၄သံထွက်တဲ့ အတွက် Syllabe ၄ ခု ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် စကားပဲပြောပြော၊ စာပဲ ဖတ်ဖတ် စာလုံးတိုင်းကို သူ့ရဲ့ Syllabe အကုန် ထွက်ရပါမယ်။ regarder ရ ဂါ ဒေ ကြည့်သည်ဆိုတဲ့ ကြိယာမှာ Syllabe ၃ ခုပေါ့။
ကောင်းပြီ ၊ ကြိယာ အုပ်စု (၁) မှာပါဝင်တဲ့ “… er “ နဲ့ အဆုံးသတ်တဲ့ကြိယာထဲကတချို့ကိုကြည့်ပါ။
၁။ ” … cer “ ဖြင့် ဆုံးသောစာလုံးများ။ ဥပမာ — placer ပလာစေ ၊ အုပ်စု (၁) တွင်ပါဝင်သည်။ ထားသိုသည်၊ နေရာချထားသည်ဟု အဓိပါယ်ရပါသည်။ Conjugaison လုပ်သော အခါတွင် အုပ်စု (၁) ဖြစ်သောကြောင့် Je place ကျနော် နေရာချထားသည်, Tu places ခင်ဗျား နေရာချထားသည် , il place သူ နေရာ ချထား သည် , elle place သူမနေရာချထား သည် ဟု အဓိပါယ်ရပါသည်။
သို့သော် ကျနော်တို့နေရာချထားသည်ဟုပြောရန် Nous placons ဟုသုံး၍ မရတော့ပါ။ Nous plaçons နူ ပ လာ စွန် ဖြစ်ရပါမည်။ စာလုံး ” c “ မဟုတ်တော့ပါ။ အောက်တွင် ပါသော အတက်ကလေးကို cédille ဟုခေါ်ပြီး စာလုံး “a” “o” “u” စာလုံးများ ၏ရှေ့တွင် ” c “ ကို ” ç “ ပြောင်း ပေးရပါမည်။ အသံအနေနှင့် ” ç ” စ သံထွက်ပါမည်။
၂။ ” … yer “ ဖြင့် အဆုံးသတ်သော ကြိယာများတွင် Conjugaison လုပ်သောအခါ ” y “ မှနေ
” i “ သို့ပြောင်းပါမည်။ ဥပမာ — nettoyer နေ တွား ရေး သုတ်သည် ဆိုသော ကြိယာကို ကြည့်ပါ။
ကျနော် သုတ်သည်( ဖုံသုတ်သည်။ အဝတ်ဖြင့်စားပွဲကို သုတ်သည်) လို့ ပြောရန် Je nettoye la table
ရနေတွားလာတားဘ်လ်ကျနော်စားပွဲကိုသုတ်သည်။ စာကြောင်းတွင် nettoie ဆိုမှမှန်ပေမည်။
”e“ ၏ရှေ့တွင် ကျရောက်ပါက ” y “ သည် ” i “ သို့ ပြောင်းသွားမည်။
Je nettoie ရနေတွား ကျနော် သုတ်သည် , il nettoie အီလ်နေတွားသူ သုတ်သည် , nous nettoyons နူ နေတွားယွန် ကျနော်တို့ သုတ်သည်(“e” ဖြင့် မဆုံးတဲ့အတွက် ပုံမှန် )
” … ayer ” နဲ့ဆုံးတဲ့ကြိယာဆိုရင်တော့ ” y “ မှ ” i “ သို့ပြောင်းရင်လဲမှန်တယ်၊မပြောင်းရင်လဲမှန်တယ်။ ဥပမာ – payer ပေး ရေး ငွေပေးသည်။ ( donner ဆိုရင်တော့ ပစ္စည်း တခုခု ပေးတာပါ)
Je paye ( paie ) ရပေးကျနော်ငွေပေးသည် , elle paye ( paie ) အယ်လ် ပေး သူမ ငွေပေးသည်
၃။ ” … eler ” အဆုံးသတ်ဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးကအသံမထွက်တဲ့ ”e“ နဲ့ အဆုံးသတ်ရင်တော့
Conjugaison လုပ်တဲ့အခါမှာ ” l “ က၂လုံးထပ်သွားရပါမယ်။ဥပမာ – appeler အာ ပ လေ ခေါ်သည် ။ ( တစ်စုံ တစ်ယောက်ကို ခေါ်သည်။ အမည်ခေါ်သည်ကို သုံးလို့မရပါ )
J’appelle … ရာ ပဲလ် ကျနော် … ကို ခေါ်သည်, il appelle… အီ လ ပဲလ် သူ … ကိုခေါ်သည် , elle appelle… အယ်လ် လာ ပဲလ်သူမ … ကိုခေါ်သည်, nous appelons…. နူ ဇာ ပလွန် ကျနော်တို့ … ကိုခေါ်သည် ( “e” ဖြင့် အဆုံးမသတ်တာဖြစ်လို့ ပုံမှန် အနေနဲ့ ပြန်ဖြစ်သွားတယ်)
သို့သော် ချွင်းချက်အနေနဲ့ ဒီစာလုံးတွေကိုမှတ်ထားပါ။ သီးခြား ဖြစ်ပါတယ် ။
celer, ciseler, déceler, démenteler, écateler, geler, marteler, modeler, peler,
ဥပမာ – peler ပလေအခွံနွှာသည်
Je pèle ရ ပဲလ် ကျနော်အခွံနွှာသည်, il pèle အီလ် ပဲလ် အခွံနွှာသည်, elle pèle အယ်လ် ပဲလ် သူမအခွံနွှာသည်, nous pelons နူ ပ လွန် ကျနော်တို့ အခွံနွှာသည် (ပုံမှန် အတိုင်းပြန်ရေးသည်) ”e“ စာလုံးပေါ်မှာ ဗမာလို နောက်ပစ်လို ထဲ့ ရပါတယ်။ Accent Grave လို့ခေါ်ပါတယ်။ ” è “
၄။ အလားတူစွာပဲ ” … eter ” အဆုံးသတ်ဖြစ်နေရင် ” … eler ” အတိုင်းပဲ ” t “က၂လုံးထပ်သွားရပါမယ်။ဥပမာ – jeter ရက်တေ လွှင့်ပစ်လိုက်သည်
Je jette ရ ရက်ထ် ကျနော်ပစ်သည် , tu jettes ကျူ ရက်ထ် မင်း၊ခင်ဗျား ပစ်သည်, il jette အီလ် ရက်ထ် သူ ပစ်သည် , elle jette အယ်လ် ရက်ထ် သူမ ပစ်သည်, nous jetons နူ ရက်တွန် ကျနော်တို့ပစ်သည်။( ပုံမှန်)
ဥပမာ – acheter အာ ရှက် တေ ဝယ်သည်
j’achète ကျနော်ဝယ်သည် , tu achètes မင်း၊ခင်ဗျားဝယ်သည်, Nous achetons ကျနော်တို့ဝယ်သည် ။( ပုံမှန် ) အသံထွက် မရေးပေးတာက အောက်မှာ လင့်ပေးထားလို့ပါ။
j’achète une pomme. ကျနော်ပန်းသီးတလုံးဝယ်သည်။
Nous achetons une voiture. ကျနော်တို့ ကားတစီးဝယ်သည်။
Elle achète une maison. သူမ အိမ်တလုံး ဝယ်သည်။
( အခု သိထားသမျှ နာမ်တွေ ၊ ကြိယာတွေနဲ့ စာကြောင်း တော်တော်များများလုပ်နိုင်နေပြီ )
Verbe Conjugaison နဲ့ပါတ်သက်လို့နဲနဲပြောချင်ပါတယ်။အခုခေတ်မှာ Youtube ထဲကို Conjugaison acheter လို့ ရိုက်ထဲ့လိုက်တာနဲ့ အပေါ်ကလင့်အတိုင်းတန်းထွက်လာ တာပဲ။ သိချင်တဲ့စာလုံးကို ရိုက်ထဲ့လိုက်ရင်ပြင်သစ်ဆရာပေါင်းများစွာထွက်လာမယ်( ကောင်းတဲ့အသံထွက် ကိုတော့ရွေးတတ်ဖို့လိုပါမယ်) ဥာဏ်ရှိသလို သုံးနိုင်ရင် အခုခေတ်မှာ အကုန်လွယ်သွားပြီ။ပါရီမောင် တို့ခေတ်တုံးက Conjugaison စာအုပ်လေးတအုပ် သူငယ်ချင်းတယောက်က ရှားရှားပါးပါးရလာတာကို စာကူးစက် နဲ့ လှည့်ထုတ်ပီး အတန်းထဲမှာ လက်သိပ်ထိုးရောင်းပြီး Conjugaison ဒုက္ခကို ရှင်းရတယ်။ ဟိုတုံးကတော့ ကွန်ပြူတာစာစီစာရိုက် ခေတ်မဟုတ်သေးဘူးလေ။ အခုတော့ မူရင်းစာအုပ်လေးကို ကိုင်နိုင်နေပြီပေါ့ဗျာ။
အခုအချိန်ထိ ကြိယာအုပ်စု (၁) မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ဦး။ အထက်က ရှင်းလင်းချက်တွေက ကြိယာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခန်းမှာ ပြည့်စုံအောင် ထဲ့ထားရတာဆိုတော့ အကုန်လုံးကို အသေးစိတ် သိဖို့ မလိုသေးပါဘူး။ ဘာကြောင့်ဖြစ်လာရသလဲ ဆိုတာကို တချိန်မှာ ပြန်ပြီးကိုးကားရအောင်ပါ။ အကြမ်းအာဖြင့်
” … er “ နဲ့အဆုံးသတ်ရင် ကြိယာအုပ်စု (၁) ဆိုတာကိုမှတ်ရင်ရပါတယ်။ (အခြေခံ နဲနဲရှိပြီး မရှင်းလင်းသူတွေ အတွက် အသုံးဝင်နိုင်ပါတယ်။ )
အပြန်အလှန် စကားပြောတာလေးတွေ ပေးသွားရင်းမှာပဲ ပါဝင်တဲ့ စာလုံးတွေကို ရှင်းပြသွား မယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ သင်ခန်းစာ ကို သဒ္ဒါ အပိုင်းနဲ့ စကားပြော အပိုင်းလို့ ခွဲလို့ ရတာပေါ့ ။
အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်ကို နားထောင်ပါ၊ အသံ တထပ်တည်းရအောင်လေ့ကျင့်ပါ။ ဘယ်အခါတွေမှာ ပြောရမယ်ဆိုတာရယ် ၊ အဓိပါယ်နဲ့ သဒ္ဒါကို ရှင်းပါမယ် ။
1.Bonjour (ဗမာလို မင်္ဂလာပါ နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ချင်ပါတယ်၊ ညနေအချိန်လောက်အထိ ပြောနိုင်ပါတယ်၊ သူ့အတိုင်းပဲ ပြန်ပြော ရင်ရပါတယ် ) bon – ကောင်းသော , jour – နေ့
ဥပမာ – Bon Anniversaire ဘွန်း နာနီ ဗက်စယ် ဆိုရင် Happy Birthday လို့ ဆုတောင်းပေးတာပါ
2.Bonsoir ( ညနေပိုင်းမှာ နှုတ်ဆက်တာပါ ၊ကောင်းသောညနေ ပေါ့နော်။ သူ့အတိုင်းပဲ ပြန်ပြော ရင်ရပါတယ်) bon – ကောင်းသော ,soir– ညနေ” bon “ဆိုတာ ကောင်းသောလို့ အဓိပါယ်ရတဲ့ adjectif
3.Salut အင်္ဂလိပ်လို Hi ပေါ့၊ ( ရင်းနှီး သူချင်း နှုတ်ဆက်တာပါ ၊ သူ့အတိုင်းပဲ ပြန်ပြော ရင်ရပါတယ်)
4.Comment allez -vous? (ကိုယ့်ထက်ကြီး သူ၊ ဂါရဝ ထားရမဲ့ သူတွေကို နေကောင်းပါရဲ့လား လို့မေးတာပါ။ ပြန်ဖြေရင် Je vais bien, Nous allons bien, Très bien ( Merci ) စသဖြင့်ဖြေပါတယ်
5.Comment vas-tu? ရင်းနှီးသူချင်း၊ မိသားစုချင်းမေးရင် သုံးတာပါ။ တယောက်ထဲကိုမေးတာပါ
Je vais bien,Très bien ( Merci ) စသဖြင့်ဖြေပါတယ်။( အဓိပါယ်ကိုစာလုံးအတိုင်း အတိအကျ ပြန်ရင် မင်း၊ခင်ဗျား ဘယ်လိုသွားလဲ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ နေကောင်းလား လို့မေးတာပါ)
6.Comment ça va? ဘယ်လိုလဲ ၊ ok ရဲ့လား ၊ အဆင်ပြေရဲ့လား ပေါ့။ ça va အဆင်ပြေပါတယ်။ ça (ne) va pas. အဆင်မပြေဘူး။ စသဖြင့်ဖြေရန်။
7.Quoi de neuf ? အပေါ်ကလိုပါပဲ ။ ဘာထူးလဲ လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။
9. Très bien အရမ်းကောင်းပါတယ်။ Très ဆိုတာကြိယာဝိသေသန၊ အင်္ဂလိပ်လို Adverb၊ အရမ်း လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Très belle,Très jolie အရမ်းလှတယ်(လူ၊ အရာဝထ္တု)Très beau.အရမ်းသာယာတယ်
10. Pas mal မဆိုးပါဘူး
11. Mal ဆိုးတယ် ၊
12.Bien, et vous? ကောင်းပါတယ် ၊ မင်းရော ( ခင်ဗျားရော) ( လူကြီး များအတွက်)
13. Bien , et toi? ကောင်းပါတယ် ၊ မင်းရော ( ခင်ဗျားရော) ( သူငယ်ချင်း၊ မိသားစုဝင် တယောက်ယောက်နှင့်ပြောရန် အတွက်)
14. Pas grand chose အထွေအထူးမရှိပါဘူး ၊ အကြောင်းမထူးပါဘူး
15. Au revoir နှုတ်ဆက်ပါတယ် good bye(ပြန်ပါဦးမယ်၊ မကြာခင်ပြန်တွေ့မယ် ဆိုတာတွေရှိပါတယ်)
16. Salut အင်္ဂလိပ်လို Hi ပေါ့၊ ရငိးနှီးသူချင်းသုံးရန်အတွက်ပါ
17. A bientôt. (စာလုံး အကြီးနဲ့ ရေးရင် သင်္ကေတတွေ မထဲ့ရပါဘူး။ပုံမှန်ရေးရင်တော့ ” à “) မကြာခင်တွေ့မယ် ၊
18. A plus tard နောက်မှတွေ့မယ် ၊ A ဆိုတာကတော့ Preposition ဖြစ်တဲ့ “à” ကို ပြောတာပါ၊
19. A demain နက်ဖြန်တွေ့မယ် ၊ à samedi ဆိုရင်တော့ စနေနေ့မှာတွေ့မယ်ပေါ့၊ Preposition ထဲ့ပြောရပါတယ်၊ à demain soir နက်ဖြန်ညနေတွေ့မယ် , à samedi matin စနေနေ့ မနက်တွေ့မယ်
20. A la prochaine (fois ) နောက်တခါပေါ့
21. Bonne journée ကောင်းသော တနေ့တာဖြစ်ပါစေ(တနေ့တာပါ)
22. Bon après-midi ကောင်းသော နေ့လည်ခင်းပါ
23. Bonne soirée ကောင်းသော ညနေခင်းပါ
24. Bonne nuit ကောင်းသော ညပါ (တနေ့တာ အတွက် နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရန်သာ)
25. Adieu good bye
Au revoir မကြာခင် ပြန်ဆုံမယ်